Semalt: Fomba entina manadihady ny fampandehanana SEO anao
Matetika izahay mametraka ny fontsika hanao zavatra, ary raha ara-boajanahary, dia heverintsika fa ho tena tsara izany. Saingy tsy izany foana no zava-misy. Na dia efa nahavita ny ezaka ataontsika aza isika, dia mbola mila manombatombana. "Ny diso dia olombelona." Afaka manao hadisoana isika ary ny fomba iray hahitantsika ireo lesoka ao amin'ny tranokala iray dia ny fandalinana azy.
SEO dia zavatra apetrakay amin'ny fotoana sy ny ezakantsika atao. Ao amin'ny Semalt dia manome anao serivisy BEST SEO izahay, saingy miverina mandinika sy manombatombana ihany koa izahay. Amin'ity fomba ity, azontsika jerena ny mety ho fisintomana sy ny fanitsiana, hiantohana ny fahazoana ny famakafakana tranonkala marina indrindra. Mba hahavitana ity tolotra ity dia afaka mampivelatra ny tranonkalanao koa isika ary manitsy ny lesoka rehetra mety aminy.
Raha mbola manana fitaovana sy fahaiza-manao tsara ianao dia afaka manatanteraka ny famakafakana SEO anao ny tenanao, fa raha tsy izany dia tsara indrindra ianao hahazo fanampiana avy amin'ny matihanina toa an'i Semalt. Na izany aza, tsy ho tianao ny hidiranao mafy ny fandalovanao SEO ratsy noho ny fanadihadihana SEO ratsy.
Ny fandalinana ny SEO anao dia manisy karazana safidy marobe, ary io dia mety ho tsy fitovizan'ny fampielezan-kevitra SEO mahomby sy tsy mahomby. Jereo any SEO, toy ny miezaka ny hisarika an'io olona io hisarika anao. Tamin'ny voalohany dia toy ny kintana tsy dia lavitra any amin'ny tontolo maizina midadasika ianao, saingy manomboka manandrana. Angamba tsy mandeha ny drafitra voalohany nataonao, saingy miverina indray ianao ary manandrana fomba hafa mandra-pahatonganao ho masoandro eo imason'io olona io. Izany no ilain'ny tranokala tsirairay, ary ny famakafakana SEO dia fitaovana hojerena raha miasa ny fomba voalohany anao. Raha tsy misy ity famakafakana ity, mety tsy ho tsikaritrareo fa tsy mandeha ny fomba ataonao na dia tsy diso aza izany.
Saingy efa misy ny famakafakana SEO rehetra?
Misy fitenenana mety ho henonao eo amin'ny tontolon'ny orinasa izay mihatra amin'ny fiainana. Toy ny hoe "raha tsy afaka mandrefy azy ianao dia tsy afaka manatsara azy" ho tsara indrindra, mila fantatrao hoe tsara ianao raha tsia, ahoana no tsara indrindra?
Ny fahaizanao mandrefy izay tsara ataonao SEO dia zava-dehibe amin'ny fampitana ny tranonkalanao amin'ny pejy voalohany ary misy laharana voalohany. Toy ny karatra fampitaovana dia manondro ny tanjakao sy ny fahalemenao ahafahanao mihatsara. Soa ho an'ny orin'asa, azonao atao ny manamarina fa tsara ny fahaizanao optimization SEO miaraka amin'ny fitaovana antsoina hoe Google Analytics.
Na dia manoro hevitra anao aza izahay fa mampiasa Semalt, azonao atao samirery ity, azonao atao ny mahalala ny mandrefy, ny fomba fampiasana ny fitaovana ary ny fomba fampiharana ny fanitsiana ao amin'ny tranokalanao. Raha tsy izany dia mifandraisa am-pitiavana ny fikarakarana ny mpanjifa Semalt na ny ekipa mpanoratra mahafinaritra anay eto. Azontsika atao ny mamakafaka ny vokarinao ary mampihatra ny fanitsiana azy, izay mametraka anao eo amin'ny toerana ambony indrindra misy anao.
Saingy raha te hamaky fotsiny ny dikan'ny fanatanterahana ny famakafakana SEO ianao dia eo amin'ny toerana mety ianao.
Raha mikasa ny hanao famakafakana ny fahaizanao SEO ianao, ireto misy zavatra tokony jerenao:
Imbetsaka ny fahalalana no hery. Raha tsy misy ny fahalalana handrefesana izay zava-dehibe, dia hiafara amin'ny valiny maro izay tsy ilaina tanteraka ianao. Tokony ho azonao izany alohan'ny hidiranao amin'ny ampahany teknika amin'ny famakafakana SEO.
Mandritra na aorian'ny famakafakana SEO dia fahita matetika amin'ny vao haingana sy ny matihanina matihanina ho tratry ny fahatsentsenan'ny metaly azy. Matetika ianao no tratra amin'ny fahatsapana rehareha sy mahavita amin'ny halehiben'ny fomba fijerinao amin'ny pejy. Na izany aza, tsy mijanona ny mandinika momba ny kalitaon'ireo fijerena pejy ireo ianao. Fa kosa, tokony handrefesanao mihoatra ny tsindry ianao, handrefesana ny resaka.
Ny metrikaly mahaliana izay tokony hotadiavinao dia ny tahan'ny fisondrotana. Izany dia mampiseho ny isan'ireo mpampiasa mahazo izay alehany avy amin'ny pejy iray fotsiny ary mandroso. Amin'ny teny hafa, maneho mpamaky voky izy ireo fa tsy mandalo pejy hafa ao amin'ny tranonkalanao. Tsy tahaka ny mety hoeritreretinao, fa vitsy kokoa ny isan'ny zana-bony, ny tsara kokoa. Efa nitady fampahalalana manokana isika rehetra ary rehefa manindry rohy iray dia mila mamaky pejy maromaro isika alohan'ny hahazoantsika ny vaovao ilainay. Tsy tsara izany, ary imbetsaka no very ny mpampiasa. Rehefa manombatombana ny tahan'ny biraonao, misy na inona na inona eo anelanelan'ny 26% sy 40% dia tsara, ary izay rehetra lehibe lavitra noho ny 70% dia heverina ho ratsy, ary mety mila miasa amin'izany ianao.
Ny fihenam-bidy na koa fampihenam-bidy dia zava-dehibe satria mampiseho izany fa ny mpamaky anao dia liana amin'ny zavatra holazainao ary tena maharesy lahatra ianao.
Ny fomba fijerin'ny pejy
Ny fijerena ny fijerinao pejy ahitanao dia fomba iray hafa manan-danja ihany koa hanamarinana ny fahaizanao SEO amin'ny ankapobeny. Ny fijerin'ny pejy marobe kokoa dia midika fa manao SEO tsara ny SEO anao, ary mitondra mpanjifa bebe kokoa amin'ny tranokalanao. Ny fijerin'ny pejy vitsivitsy, kosa etsy andaniny, dia milaza fa tsy mipoitra ny tranokalanao rehefa nokatsahina ny teny fanalahidy mifandraika, na tsy mahafatifaty ny tranokalanao raha tsy afaka mahita ny mpijery.
Matetika, ireo no lafin-javatra tsy takatry ny mpandinika ny asa SEO vaovao
Ahoana no famakafakana ny fanatontosana tranonkala SEO
Fakafakao amin'ny fampiasana fitaovana SEO Analysis
Iray amin'ireo zavatra tsy azonao atao raha tsy misy fanampiana. Tsy afaka mamaky ny tranokalanao ianao ary manapa-kevitra momba ny fahombiazan'ny SEO anao. Mba hanaovana izany, mila fitaovana ianao.
Misy fitaovana maromaro amin'ny Internet azonao ampiasaina hamakafakana ny SEO anao. Raha tianao kokoa ny mampifantoka ny herinao amin'ny zavatra hafa, azonao atao ny mametraka an'io asa io amin'ny Semalt. Hahazo ny famakafakana ny fahombiazanao SEO ianao tsy misy ny fotoana anananao. Izahay dia manao fanitsiana sy fanitsiana rehetra mba hahazoana antoka fa eo amin'ny tampony ny tranonkalanao, izay misy azy.
Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny SEO analytics fitaovana dia Google Analytics. Ankoatry ny ny fananan'ny Google, izay tena mahafinaritra, dia maimaimpoana ihany koa.
Rehefa manadihady ny SEO anao ianao, ny dingana voalohany dia miverina mandinika mijery ny asanao SEO ankapobeny. Amin'ny fandalinana ny fiovana amin'ny fitateram-bola ara-organika tanteraka mandritra ny fotoana, dia azonao atao ny manaporofo raha miasa ny paikady SEO na tsia.
Manara-maso ny fifamoivoizana organika anao
Ity no fomba miharihary indrindra raha mahita ny fanaovana ny tranokalanao SEO dia amin'ny fahitana ny isan'ny biraonao azonao. Ity famakafakana manokana ity dia natao ho an'ny fametrahana tranonkala organik sy karama. Raha mampiasa Google Analytics ianao, azonao atao ny manamarina ny fifamoivoizana amin'ny alalàn'ny fahazoana dia mifindra daholo ny fifamoivoizana rehetra. Raha manaraka ireto dingana ireto ianao dia tokony ho hitanao ny fahombiazan'ny fifamoivoizana ataonao. Ho hitanao ihany koa ny fahombiazan'ny fifamoivoizana organika raha ampitahaina amin'ny referrals na rohy avy amin'ny dokambarotra media.
Midika izany fa tsy dia tsara loatra ny SEO anao amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fifamoivoizana na manjavozavo ary tokony hanitsy ny votoatin'ny tranonkalanao sy ny paikady SO ianao.
Manara-maso ny backlink anao
Noho ny fitomboan'ny lazan'ny tranonkalanao dia tokony hanomboka hitanao ny fitomboan'ny isan'ny backlink amin'ny tranokalanao. Na izany aza, tsara kokoa raha toa ka tsy tototry ny zavatra ianao satria zava-dehibe koa ny kalitaon'ireo backlink ireo. Jereo ny fahefan'ny domain an'ny tranokala izay manome ireo backlink ireo amin'ny tranonkalanao. Amin'ny famakafakana ny atiny ametrahana ireo backlink ireo dia manana hevitra momba izay eritreretin'ny olona ny tranokalanao ianao. Rehefa azonao ireo dia azonao atao ny manova io fomba fijery io na hanararaotra izany.
Fakafakao amin'ny SEO ny teny fanalahidy
Raha tokony handinika ny SEO an'ny tranonkalanao ianao amin'ny alàlan'ny rafitra rehetra sy ny isan'ny sary azo, dia azonao atao ny mamakafaka azy amin'ny isa sy ny kalitao ampiasaina ao. Izany dia nilaza fa tsy manao asa goavana ny Google Analytics manambara data momba ny teny, ka mety te hahazo fitaovana SEO analytics hafa ianao.
Rehefa manadihady ny tranokalanao ianao ary mahazo valiny tsy faly aminao, ny zavatra voalohany ataonao dia jerena ny olana. Matetika, dia iray amin'ireo roa izy ireo.
Koa satria latsaka ambanin'ny atiny ny teny fanalahidy, izy ireo dia manamboatra tsara ny haben'ny tranonkalanao mampiseho ny Google na ny mpitsidika ny antony ilain'ny tranokalanao. Saingy raha te hahafantatra hoe tsara ny teninao, dia mila manadihady ianao. Mampiseho anao izany raha tsy mbola karohina ny teny fanalahidy, raha tsy ampy izy na tsy ho tonga any amin'ny mpihaino kendrenao. Amin'ity fomba ity dia afaka miasa amin'ny votoatinao mifanaraka amin'izany ianao ary mahazo ireo tsindry ireo.
Nahita takelaka tapaka ny tranokalanao
Ny pejy simba dia fomba iray azo antoka hanadinana ny mpitsidika ao amin'ny tranokalanao. Raha tsy afaka miditra pejy iray manana fampahalalana tadiavina ny mpitsidika dia tsy ho liana amin'ny tranokalanao manontolo izy ireo. Midika izany ny fampihenana ny fifamoivoizana sy ny mety ho mpanjifa. Ny fanovana ny hadisoana pejy tapaka dia tena zava-dehibe, ary ao amin'ny tranokala misy pejy 100 0r 200 dia lasa sarotra be izany. Izany no antony ilainao manadihady ny tranonkalanao hahitana azy ireo.
Fakafakao ny hafainganana ny tranokalanao
Ny hafainganam-pandehan'ny toerana dia iray amin'ireo antony lehibe tokony hofantarinao na hojerenao rehefa mamaky ny famakafakana ny tranokalanao. Google dia manendry tranonkala haingana kokoa, ka raha te hanana toerana ambony ianao na hiseho eo amin'ny pejy voalohany dia tsy maintsy haingana ny tranonkalanao. Ny fampiasana fitaovana famakafakana toy ny fijerin'ny hafainganam-pandehan'ny pejy dia hilaza aminao ny halavan'ny atin'ny tranokalanao. Ny fanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny tranokalanao dia manatsara ny fanandramana mpampiasa anao ary mahatonga ny mpampiasa bebe kokoa hitoetra ao amin'ny tranokalanao. Saingy ny tranokala miadana iray dia hanakorontana ny mpitsidika anao ary mamela azy ireo alohan'ny hisehoana ny votoatinao amin'ny efijery.